KyiMayKaung: May 2016
Not good--"Bengali" that is Rohingya being driven from their homes -- from Facebook
Not good--"Bengali" being driven from homes--
‎Min Min Soe‎ to 2015 Demo Pa Yit
"ဘင်္ဂါလီအရေး ဝန်ကြီးချုပ်ဦးညီပု ဥပဒေနဲ့အညီ
ပြတ်ပြတ်သားသား လုပ်ပြီ" ...
၂၁့ ၅့၂၀၁၆ နေ့ စစ်တွေ
အောင်မဂ်လာ ရပ်ကွက် ခိုးဝင်
ဦးညီပု ကို အပြစ်ဖွဲ့နေသူများ
ဘယ်ပါတီက အမတ်များ အခုလို့
လေလံ ပွဲစားဘ၀နဲ့ ၅ နှစ်
အောင်မင်္ဂလာရပ်ကွက် မှာ ယခင်
ရွာသား ၄၂၀၃ မှအပ ခိုဝင်းနေလူ
အားလုံး လူပေါင်း ၅၀၀၀ ခန့်
ဘင်္ဂါလီများကို စစ်တွေမြို့ ရပ်မိရပ်ဖ
ဖိအားကို မထီ စိတ်ဖြင့် ရခ်ုင်
၃ ခန်သာရှိသော ၀န်ကြီးချုပ်
ပြလိုက်ပါပြီး ဦးညီပု မျိုးချစ်
၀န်ကြီးချုပ် ကို ၀ိုင်ရံပေးကြပါ
Credit. Shwe Zeddy
Rohingya. Rohingya. Rohingya. How about the fate of the Rohingyas in their squalid, low-lying, sea-level camps with Roanu Cyclone bringing massive rain-fall?
Kyi May Kaung Thank you for your enduring support, pl share. I am trying to find out who this new minister U Nyi Pu is.
Kyi May Kaung I think this action is designed for the monsoon. Wife ofaprominent prof told me that their exit from Burma was delayed on purpose to coincide with winter in West.
Burmese tycoons saying they will give compensation money to China for stopping Irrawaddy dam project.
Sounds too good to be true--like an April Fools' joke--
Burmese tycoons saying they will give compensation money to China for stopping Irrawaddy dam project. I don't know if they will really come through. Also I don't know how the already constructed portions will be removed?? and at what cost.
Local economists should work on the $$$ cost of rectifying previous govt's big mistakes--I am sure some like NPT, mis-sited factories, are there forever, and then it isamatter of "repurposing," shutting down or selling off.
Real Religion News - Burmese Version added3new photos.
29KKhin Saw Nyein, Khin Zaw Latt and 29K others
49 of 5,865
သစ် ရာ ရာ သတင်းကအမှန်အကန်သတင်းကောဟုတ်လို့လား ဒီလူတွေဒီလိုစကားပြောမယ်ဆိုတာ Video နဲ့ တကွ ကြားမြင်ရမှယုံမယ်
Like · Reply ·2· April 16 at 12:16pm
Zar Ni သန်းရွှေ နဲ့ အပေါင်းအပါ
ဝေစါး အဖွဲ့ ကိုလျော်ခိုင်းပါ
Like · Reply ·2· April 17 at 5:20am
Cross Walk Excellent
Like · Reply · April 18 at 12:43pm
Thi Sar အခုတော့ပြည်သူကြားကောင်းအောင်ပြောကြပြီပေါ့မင်းတိုချမ်းသာသမျှတွေဟာစစ်အစိုးရနဲ့ပေါင်းပြီးရခဲ့တာဆိုတာမမေ့ပါနဲ့ ဘဝမမေ့ပါနဲ့
Like · Reply ·2· April 19 at 3:22am
Like · Reply · April 19 at 3:58am
Pyone Par အမေကျွန်တော်ကပြည်သူတယောက်ပါ။ကျွန်တော်တိုပြည်သူသန်း၅၀ကိုကတယောက်၁သိန်းစီခွဲတန်းကျတာဝန်ထမ်းပြီးရော်ရမယ်ဆိုလည်းပေးဆပ်ရဲပါတယ်အမေ။
Like · Reply ·2· April 19 at 1:37pm
Pyone Par အမေကိုအားလုံးချစ်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်အမေမျက်နှာမငယ်ပါနဲ့။အမေသာဆော်သြောပါ။အားလုံးဝိုင်းဝန်းမှာပါ
Like · Reply · 1 · April 19 at 1:40pm
Kyawzaw Win Very very good.
Like · Reply · April 19 at 9:24pm
Ar Mi ဘယ်သူကအကူအညီတောင်းနေလို့ဒီလောက်ရက်ရောနေကြပါလိမ့်။
Like · Reply · 1 · April 20 at 11:26am
Konaing Konaing ခွေးမသားလက်ထက်ကရောင်းလို့ဒီလိုဖြစ်နေသာ
Like · Reply · 1 · April 21 at 1:11am
Konaing Konaing တရုတ်ကမင်းနှမတွေမင်းအမေတွေပါဝယ်သွားလိမ့်မယ်ဂရုစိုက်
Like · Reply · 1 · April 21 at 1:13am
Thae Tone ကြားရတာတော့အားကျစရာပါပဲ ဘာမှမထောက်ပံ့နိုင်တဲ့ ကျွန်တော်တို့လိုလူလေးတွေကတော့ ဒီသတင်းသာတကယ်ဖြစ်ပါစေလို့ဆုတောင်းရမှာပါပဲ
Like · Reply ·2· April 21 at 10:20am
U Kyaw Myint G
Like · Reply · April 22 at 11:13am
Aye Aye Aung ဝမ်းသာလိုက်တာဟယ်
Like · Reply · 1 · April 22 at 12:21pm
May Thet Aung အမေ
Like · Reply · April 23 at 1:45am
NayLa WinOo တရားဝင် ဘာမှာ့ မရှိသေးတာ ကို ဇတ်လမ်း လိ့ပဲ ထား မယ်~လေးဘေးသင့် အိုင်ဒီယာကွေး မှာစိုးလို့~
Like · Reply · April 23 at 1:49am
Aung Ko Min ထောင်မြင်လို့ရာစွန့်မဟုပ်ပါစေနဲ့
Like · Reply · April 23 at 3:00pm
Winn Ohn ဦးသန်းရွှေလျော်ရမှာ
Like · Reply · 1 · April 24 at 7:59am
Minaung Aungmin ဒီစကားအမှန်ကန်ဖြစ်ပါစေလား
Like · Reply · April 24 at 9:05am
Myat Yu Mon
Like · Reply · April 25 at 12:27pm
Panthit Sar အားပေးပါတယ်
Like · Reply · April 26 at 1:33am
ကံ စီမံရာ ခေတ်အဆက်ဆက်သာပေါင်းညာစားတွေမင်းတို့ရထားတဲ့ငွေတွေဟာပြည်သူမျက်ရည်စာတွေကျတော်သာအစိုးရဆိုလို့ကတော့အားလုးံသိမ်းပြီးလျော်ပစ်မှာစောက်ကုလားနူစ်ကောင်ကဧည့်နိူင်ငံသားမဟုတ်ရင်လီးလား မင်းတို့အဖေတွေကရခိုင်ပြည်နယ်မောင်တောမြို့နယ်အလယ်သံကျော်ကိုထွက်ပြေးလာတဲ့ဘင်္ဂလားကကုလား မင်းအဖေနိူင်ငံသားမှတ်ပုံတင်ရှိလား
Like · Reply · April 27 at 3:18am
Aung Thein Oo ဝမ်းသာလိုက်တာ နိုင်ငံအတွက်အားလုံးကဝိုင်းဝန်းပြီးကူးညီကြတာ
Like · Reply · 1 · April 27 at 2:35pm
Hla Hla Htay မယုံပါ
Like · Reply · April 30 at 8:45am
Maung Maung Yesagyo ဦးသန်းရွှေနဲ့အပေါင်းပါတွေလျော်ပါ
Like · Reply · May 1 at 2:36am
Kaung Kaung တကယ်ဆို၇င်တော့ပျော်စ၇ာကြီးပေါ့ဗျာ
Like · Reply · May 1 at 11:30pm
Nay Myo ခွေးသန်းရွှေလျော်ရမှာ
Like · Reply · May2at 11:48pm
J Nyi Myint Maung sky net အသံ မကြားရသေးဘူး
Like · Reply · May3at 4:11am
J Nyi Myint Maung ဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ် မြန်မာဆိုတာ
ဝမ်းသာ ကြည်နူး မိပါတယ်
Like · Reply · May3at 4:12am
Ko Mg Myo ဒါဟာနိုင်ငံသားအားလုံးရဲ့စေတနာပါ
Like · Reply · May3at 12:10pm
Su Su Sandi United living mall တခုလုံးတော့မရောက်းလိုက်ပါနဲ့ နီးနီးနားနား ရှော့ပင်းမောလ်ဆိုလို့ဒီတခုဘဲရှိတာကို
Like · Reply · May5at 9:01pm
Ye Winnaing ဆောက်ရူးသတင်းနဲ့။အကန်းမန့်သူများ အဲဒါမြန်မာဗီယက်နမ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များလက်မှတ်ထိုးနေတာ။ဆောက်ရူးနဲ့ကျောက်ရူးများရဲ့။
Like · Reply · May 8 at 2:28pm
Myo Kyaw OO မြန်မာနိုင်ငံကပစ္စည်းတွေ
Like · Reply · May 8 at 9:55pm
Peace Bird Giving is Taking မဖြစ်ဘို့တော့လိုမယ်ထင်တယ်
Like · Reply · May 8 at 10:28pm
Pawoo Pawoo Pawoo ဒီလိုကြတော့ ပြောကြပါဦးခရိုနီတွေဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်
Like · Reply · May9at 1:29am
Aung Aung Kyaw Moe ဆောက်ဖြစ်မှကျောင်းတကာပါ
ဒီ post မှန်လိမ့်မယ်လို့မထင်
Like · Reply · May9at 12:26pm
Arrow Queen အားလုံးကအမေကိုချစ်ကြပါတယ်အမေမေတ္တာကြီးပါပေတယ်အားလုံးအားလုံအောင်မြင်ကြပါစေမြစ်ဆုံအတွက်ကူညီသူတွေလဲဆထက်တပိုးအောင်မြင်ကြပါစေနော်
Khu Soe Reh ခုလို စကားမျိုးတွေကြားရတာ ဝမ်းသားပါတယ်